musha Africa Desmond Tutu Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeMurevereri anonyanyozivikanwa nezita rezita rezita “Arch”. Yedu Desmond Tutu Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwaDesmond Tutu Biography kunosanganisira nhoroondo yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira, hupenyu hwemhuri, vabereki, mukadzi (Nomalizo Leah Shenxane), mararamiro, hupenyu hwega, mambure akakosha uye zvakawanda zvisipo pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve rake basa rechechi saArchbishop. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Desmond Tutu's Bio iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Desmond Tutu Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Desmond Tutu Mpilo akazvarwa pazuva re7th yaGumiguru 1931 muKlerksdorp, Chamhembe Afrika. Akazvarwa kuna amai vake, Allen Mathlare uye baba, Zachariah Tutu. Baba vaDesmond vaive mukuru wepuraimari, amai vake vachishanda pachikoro chemapofu.
Kukura muKlerksdorp iyo inonyanya kuzivikanwa nenzvimbo dzayo dzakanaka uye dzinodziya kugamuchira vaenzi, Young Tutu aive anofarira kuverenga uyo akashandisa chikamu chiri nani chemakore ake ekukura achishandisa zvinyorwa zvekunyora.
Rudo rwaTutu rwekuverenga rwakakonzerwa nevabereki vake vanoshanda mumasangano edzidzo uye kwete kupukunyuka kubva kusarura kwemarudzi ayo South Africa yaive nawo panguva iyoyo.
Kunyanya zvakadaro, chikonzero shure kwerudo rwake rwekuverenga chakaitwa pachena muzvikamu zvake zvekunyora zvemwana zvaisanganisira ngano dzaAesop, inoridzwa naWilliam Shakespeare uye mabhuku eComic Strip. Aya mabhuku anowanzo kuverengerwa nechinangwa chekusimudzira fungidziro.
Kunyange zvazvo kusarura muSouth Africa kwaiva nechokuita kuti Young Tutu anzwisise kuti nei vatsvene vake vainge vachida kurapwa, akasarudza kurarama kupfuura zvose izvo zvakamuita kuti ave nezvakanakisisa zvehutano hwehuduku.
Achirondedzera zvakaitika zvakashata zvekusarura kwemakore gare gare, Tutu akayeuka izvozvo;
“Maratidzirwo aiitwa vana vechichena nenzira yakasarudzika akaita kuti tizive pachine nguva kuti pane chisina kumira zvakanaka. Nekudaro, isu hatina kuzvinyima isu pachedu zvinhu zvakaita kuti hupenyu huve nechinangwa. takagadzira denga redu ”
Desmond Tutu Dzidzo:
Tutu aive nedzidzo yake yekutanga kuKlerksdorp mushure mezvo paakatanga-kudzidza kwake kusekondari kuBantu High School, inishuwarenzi yaive imwe yenzvimbo dzekudzidzira dzisina kugadzikana muJohannesburg panguva iyoyo.
Kunyangwe paine hurombo hwechikoro, Tutu akafamba zvakanaka muzvidzidzo nekuona kuti akaita zvakanakisa kuzvipira kwevadzidzisi vake kukanganisa vadzidzi vavo zvisinei nematambudziko avakawana.
"Panenge paine kuda, pane nzira, vadzidzisi vedu vakazvipira uye chimiro chavo chekushanda chakaita kuti zvinyatsoita kuti chero mumwe wedu ave vadzidzi vasinganzwisisike".
Anoyeuka Tutu wevadzidzisi vake vekusekondari.
Paakapedza chikoro chesekondari mu1950, Tutu akapiwa mukana wekudzidza mishonga sezvaakanga asarudza kusarudza kupinda nesayenzi yekuporesa mushure mokudzoka kubva kuchirwere apo aive achiri kuyaruka.
VERENGA Ray Hushpuppi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Zvinangwa zvaTutu hazvina kuzadzikiswa nekuda kwekutadza kwemari yakashata yemubereki wake kubhadhara mari hombe yechikoro chekurapa. Nekudaro, akadzokera kumashure pakudzidza dzidzo uye akapedza kudzidza semudzidzisi mu1953.
Desmond Tutu Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Tutu akaisa dhigirii rake rezvidzidzo mukushandisa zvakanaka nekudzidzisa Chirungu uye Nhoroondo paAlma mater (Bantu High chikoro).
Kunyangwe aifara nekudzosera kuchikoro icho chakange chamukanganisa zvakanaka, akanzwa kudiwa kwekutangisa chinangwa chepamusoro. Ndokunge, kuunza kupera kwehutongerwe enyika muSouth Africa.
Izvi zvakaudza mbeu yake kuti atange nzira yekuti ave mufundisi. saka, akatanga kudzidza kuSt. Peter's Theological College muJohannesburg mu1958, akava mudhikoni weAnglican mu1960 uye akagadzwa semupristi mu1961.
Chido chaTutu chekuenderera mberi nedzidzo yake chakamuona achienda kuLondon kwaakakwiridzira masters edzidziso muna 1966 pa Koleji yaMambo. Achitaura nezvekusarudza kwake kuva mufundisi Tutu akaona kuti aidavira kuti chitendero chinogona kuita basa rakanyanya mukugumisa urombo kana achitsanangura pasi;
“Chapupu changu chekutanga chekuenzana kwemadzinza chakaitika ndichifamba naamai vangu. Isu takayambuka nzira pamwe nemupristi uyo akashamisa akarova ngowani yake kuna amai vangu. Kuita ikoko kwakaita kuti ndione kuti chitendero chishandiso chine simba chekuzivisa shanduko ”
Desmond Tutu Bio - Simuka Mukurumbira:
Kukwira kwaDesmond Tutu mukurumbira kwakakanganiswa nemabasa ake echechi izvo zvakamuona achitora nekuonekana munzvimbo dzaive dzekunze kune vatema. Chinozivikanwa pakati penzvimbo dzakawanda kwaive kugadzwa kwake semutungamiriri wedema mutema we Cathedral yeSt. Mary muJohannesburg.
Tutu akaita zvakanaka kushandisa chinzvimbo chake semukuru mukunyora nekutaura achipesana nehutongerwe enyika, hushingi hwaakatsigira paakasimuka nemumachechi ehutungamiriri hwezvitendero zvemuAfrica.
VERENGA Mufudzi Bushiri Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kuita kwake kushanda kwakagadziriswa mumakwikwi ekutenderera akazoita kuti asungwe uye kusungwa kwenguva pfupi mu1980.
Hazvina kutora nguva refu kuti kutsigira kwake kwekusaita zvechisimba kumutorere chimiro chinokura chenyika dzakawanda chakamuona achikunda Nobel Peace Prize muna 1984. Vamwe vese, sekutaura kwavo, inhoroondo.
Nomalizo Leah Shenxane ndiani? Desmond Tutu Wife:
Desmond Tutu ave mumakore emakore ehukama nemudzimai wake Nomalizo Leah Shenxane anozivikanwa saLeah.
Ivo vaviri vakasangana kukoreji panguva iyo Leah anga achitoshanda semudzidzisi mubazi. Makore gare gare vakasunga pfumo musi wa2 Chikunguru, 1955.
Hukama hwavo hwakakomborerwa nevana vana vanosanganisira Trevor Thamsanqa Tutu (mwanakomana mumwe chete) Theresa Thandeka Tutu (mushandi wezvehutano), Naomi Nontombi Tutu (murwiri wekodzero dzevanhu) naMpho Andrea Tutu (mupristi akadzingwa weAnglican).
Desmond Tutu Hupenyu Hwemhuri:
Desmond Tutu akakurira mumhuri ye7. Tinokuudzai nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro paBaba vake: Baba vaDesmond Tutu, Zachariah Zelilo Tutu aive mudzidzisi asati ave mukuru pachikoro chepuraimari muSouth Africa. Zachariah aive nehukama husina kunaka naTutu uyo ​​aisamufarira nekuda kwekudhakwa kwake uye kushandisa kurova mukadzi wake, Allen Mathlare.
Amai: Amai vaDesmond Tutu, Dorothea Mavoertsek Mathlare aive mubiki uye muchenesi pachikoro chevakaremara chemapofu asati apinda basa rekudzidzisa. Iye zvakare amai kuhama dzaTutu dza4 (Tamsaqa, Sipho, Gloria naSylvia).
Desmond Tutu Hupenyu hweMunhu:
Desmond Tutu ndiye ane hunhu, pasi pasi, akatendeseka uye akadzikama hunhu. Kunyanya zvakadaro, anovenga kudzvinyirirwa uye haamboregi kuparidza chiito chekuregerera kupasi.
Desmond Tutu Kurwara - Hondo.
Desmond Tutu ave nehondo refu nehurwere kwechikamu chiri nani chemakore ake ekuumba. Mufundisi akarwa neporiyo nehukusi achiri mucheche, akabatwa nechirwere chekukosora chinouraya chinozivikanwa setibhii.
Zvakatora Desmond makore maviri asati apora kubva pakurwara kwekufa. Wekupedzisira haasati anzwikwa nezvekurwara kwake sezvo parizvino ari kurwisa gomarara reprostate.
Desmond Tutu Ukama naNelson Mandela:
Imwe haigoni kutaura pamusoro pekurwisana kwehurumende yehutungamiri hwehurumende pasina kutaura nezita remukuru mukuru, Nemazuva ano Nelson Mandela aigara naTutu pamugwagwa mumwechete (Vilikazi Street) mu1975.
Apo hondo yekurwisana nehutongerwe enyika yakazopedzisira yawana mu1993, yakanga iri Tutu (Archbishop panguva iyoyo) uyo akakudza kuunza mutungamiri mutsva kurudzi.
VERENGA Femi Otedola Upwere Hwenyaya Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Mukuwedzera, Mandela akagadza Tutu kutungamira Komisheni yeChokwadi neKuyananisa iyo yakapomerwa kuisa hutsinye hwakashata hwakaitwa nemativi ose muhondo yekugumisa hutsotsi.
Desmond Tutu Untold Biography Chokwadi - Anonyanya Kuzivikanwa Munyori:
Desmond akanyora mabhuku mazhinji ayo anongororwa nehutongerwe enyika, kudzvinyirirwa, rusununguko uye rugare. Zvinoshamisa pakati pemabhuku ari kuchema murenje, Hope uye Kutambura, Mharidzo uye Hurukuro, Mashoko aDesmond Tutu, pamwe neNewmarket.
Zvimwe zvinosanganisira Rainbow Vanhu vaMwari: Kuita kweKuvandudza Runyararo, Kunamata Chechi muAfrica, An African Prayer Book, Desmond uye The Very Mean Shoko pakati pevamwe.
Desmond Tutu Rufu Runyerekupe:
Musi waApril 22, 2018, nhau dzakasanganiswa pamagariro evanhu kuti rugare rwechokwadi runotsigira rwakanga rwafa. Tutu akadzinga nyaya yerufu sejibberish achiona kuti achiri mupenyu zvikuru.
Desmond Tutu Achibudirira:
Nyaya yaDesmond Tutu haizove yakakwana pasina kutaurwa kwakakodzera kwezvaakaita nekubudirira. Zvinosanganisira;
Akanga ari munhu wechitatu kuti apiwe dhigirii inokudzwa ye doctorate kubva kuColombia University.
Muna 2000, Munsieville Library muKlerksdorp yakazotumidzwa zita rokuti Desmond Tutu Library.
Muna 2002, Desmond Tutu School of Theology yakatangwa kuFort Hare University
Aimbova purezidhendi weUnited States, Mutungamiri Barack Obama, akamupa mutungamiri weMutungamiri Medal of Freedom muna 2009.
Muna 2008, Gavhuna Rod Blagojevich veku Illinois vakazivisa 13 Chivabvu 'Desmond Tutu Day'.
Muna 2013, Desmond Tutu akagamuchira mubairo weTempleton Prize ye $ 1.1m ($ 1.6m) ye "basa rake rehupenyu hwese mukusimudzira misimboti yemweya yakaita serudo nekuregerera"
Mambokadzi Erizabheti akamupa chikwata cheBhuku reChipiri cheMutungamiriri weVenerable Order yaSt. John. Nelson Mandela akapiwawo.
Desmond Tutu Untold Biography Chokwadi:
Mukunda wake Mpho akadzingwa semupristi nokuti akawana akaroora mukadzi
Anotsigira Kodzero dzeGay, Assisted Dying (Euthanasia) uye Kubvisa Kubvisa pamuviri
Akaratidzira mune zvinyorwa zvinyorwa "Guantanamo: Rukudzo Bound Kudzivirira Rusununguko" achitamba chinzvimbo chaIshe Justice Steyn mu2004.
Desmond Akaita mutsara Rainbow Nation ye post-rusaruro South Africa.
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu DESMOND TUTU Childhoodhood Nhau pamwe untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!